Project News Archives • Ọmụma ihe ịga nke ọma
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti832 Echiche
Akụkọ oru ngo The Pitch Announces Knowledge Innovation Winners
Stephanie Desmon Julaị 7, 2021
Knowledge SUCCESS last week announced four winners from a field of 80 contestants in "Ogige ahụ," a global competition to find and fund creative knowledge management ideas for family planning.
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti1421 Echiche
Akụkọ oru ngo FP insight: Discover and Curate Family Planning Resources
Knowledge SUCCESS is excited to introduce FP insight, the first resource discovery and curation tool built by and for family planning and reproductive health (FP/RH) ndị ọkachamara. FP insight grew out of last year’s co-creation workshops ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti2169 Echiche
Akụkọ oru ngo Ọgụgụ ngwa ngwa Ndị mmadụ, Ahụike, and Environment in the Philippines: A Rich History
The Philippines has been a pioneer of programming using the multisectoral Population, Ahụike, na gburugburu (PHE) approach to improve conservation efforts, atụmatụ ezinụlọ, and overall health. A new publication highlights insights and themes from two ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti2127 Echiche
Akụkọ oru ngo Introducing People-Planet Connection
Elizabeth TullySarah V. Harlan Eprel 22, 2021
Taa, as we mark the celebration of Earth Day, we are pleased to announce the launch of People-Planet Connection—a new learning and collaborative space co-created by and for global development professionals at the intersections between ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti1783 Echiche
Akụkọ oru ngo Global Health Science and Practice Technical Exchange: Join Us!
Anne KottSonia Abraham Eprel 16, 2021
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti1667 Echiche
Akụkọ oru ngo June 2021 N'ezie: Njikwa ihe ọmụma maka mmemme ahụike zuru ụwa ọnụ
Tara Sullivan Eprel 6, 2021
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti5570 Echiche
Akụkọ oru ngo Ime njikọ bara uru na Ogbe Nhazi Ezinụlọ afọ ofufo
Kedu ka njikwa ihe ọmụma nwere ike isi (KM) wulite njikọ bara uru na atụmatụ ezinụlọ afọ ofufo na ahụike ọmụmụ (FP/RH)? Na ibe a, anyị na-enyocha ka Ịga nke Ọma Ọmụma si eji njikwa ihe ọmụma jikọọ ndị ọkachamara FP/RH na ndị ọkachamara, ka ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4399 Echiche
Akụkọ oru ngo Le Sénégal montre la voie à travers « l’aide des pairs »
Aïssatou Thioye Ọgọst 21, 2020
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti8571 Echiche
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti12230 Echiche